Momba anay - Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd.
Manaraka kalitao tonga lafatra sy mamorona marika iraisam-pirenena
Mamelombelona ny faritra iray an'ny fiara ary manompo fehikibo iray, lalana iray
Fampidirana rojo ny indostrian'ny fitaratra
Fananganana toby indostrialy sokajy tontolo
Ny olona mifantoka, tia miasa, mifanampy ary mandresy
Atsaharo ny fandaniam-poana ary miezaha hanana ny tsara indrindra
Fijerena talenta Enterprise:
Manana fahaizana sy tsy fivadihana politika
Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny 2011. Efa ho 10 taona niainany tamin'ny famokarana fitaratra kamiao. Manomboka amin'ny fampandrosoana, famokarana ka hatramin'ny varotra, hanomezana tolotra tohanana tokana ny mpanjifa, dia manana ekipa tsara indrindra hanampy ny mpanjifa amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana.
Ny vokatra dia manarona ny firenena iray manontolo amin'ny alàlan'ny tamba-jotra varotra goavambe ary manome fahafaham-po ny mpanjifanay amin'ny serivisy aorian'ny varotra. Manamboatra sy manampy vokatra vaovao izahay isaky ny tapaky ny taona. Ny vokatray dia aondrana any Etazonia, Kanada, Mexico, Amerika atsimo, Russia ary ireo firenena eropeana indrindra. Ny vokatray dia aondrana any amin'ny firenena vahiny ary nankafy tsena nampanantenaina ho an'ny kalitao avo lenta, vidin'ny fifaninanana ary serivisy tsara. ireo tany am-boalohany miaraka amin'ny mari-pahaizana OEM, miantoka ny kalitao ary tsara aorian'ny serivisy fivarotana. Ho fahafinaretanay ny manonona anao ny vidiny tsara indrindra ary manolotra anao ny serivisy tsara indrindra.
Ny soatoavin'ny orinasanay dia ny fanaovana ny marina, ny fahazotoana, ny fahaiza-miteny, ny fankasitrahana ary ny fihenan-tsasatra. Mikendry ny hanome ny mpanjifa eran'izao tontolo izao ny vokatra faran'izay tsara sy ny vidin'ny mifaninana indrindra izahay. Mba hahatratrarana an'io tanjona io dia nametraka fifehezana kalitao henjana izahay, fanaraha-maso, fitantanana tsara indrindra ary rafitra famatsiana tsara. hiantohana ny kalitaon'ny vokatray, ny ozinina rehetra iarahanay miasa ary hiara-hiasa amin'ny famokarana faritra ho an'ny ISO9001 / QS9000, fanamarinana kalitao TS16949.
Ny orinasanay dia manaraka hatrany ny filôzôfia "mifanaraka amin'ny kalitao, finoana tsara", mampiasa fanahy manavao mba hisarihana ny saina sy fiaraha-miasa bebe kokoa amin'ireo sakaizanay. laza eo amin'ny tsena. mifantoka amin'ny vidiny mirary sy ny fandefasana ara-potoana izahay.
Amerika atsimo 25,00%
Amerika Avaratra 20,00%
Mid Atsinanana 20,00%
Androany ny mpanjifanay dia avy amin'ny firenena maherin'ny 30 izay matoky ny vokatra SWB, any Afrika, Azia, Amerika atsimo, Eropa, Amerika Avaratra ary Moyen Orient sns.
Mino izahay fa ny mpiasa dia tsy ny fananana manan-danja indrindra amin'ny orinasa, fa koa ny vato fehizoro lehibe indrindra an'ny orinasa. Ny Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd. dia manome lanja lehibe ny famoronana asa mahaliana ho an'ny mpiasa ary manome azy ireo toerana malalaka ho an'ny fampandrosoana amin'ny tontolo miasa matanjaka, siantifika, mafana fo ary misokatra. Manome toky izahay fa afaka mahazo fampahalalana ampy sy fahalalahana feno ny mpiasa. miasa mba hahatanteraka ny fahafahan'izy ireo tanteraka. Ny fifandraisana sy ny fiofanana dia singa fototra amin'ny kolontsainay fitantanana. Raha manao an'izany izahay dia mino fa afaka manao fanapahan-kevitra tsara ny olona ary manao asa tsara. Miezaka ny hanome izay ilain'ny mpiasanay izahay amin'ny alàlan'ny fifanakalozan-kevitra sy valin-kafatra mifehy ny zava-bitan'ny tsirairay eo am-panatanterahana ireo fepetra takiana amin'ny asa ho avy. Manome vahana ho an'ny mpiasanay izahay ary manantena azy ireo handray andraikitra amin'ny fampandrosoana azy manokana. Ny fampiofanana sy ny fampandrosoana araka ny tokony ho izy dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny orinasa sy ny mpiasa maharitra .Miezaka izahay mba hanome karazana asa tsy miovaova mifanaraka amin'ny filan'ny tsirairay, ary mino izahay fa hamorona fifandanjana eo amin'ny asa sy ny fiainana manokana. Fantatry ny orinasa fa miovaova arakaraka ny androm-piainany sy ny filam-panahin'izy ireo ny fepetra iasaina andrasana.
Mamporisika ny mpiasantsika izahay mba ho mavitrika, mamorona ary manohitra ny fomba fiasanay, satria ny fahalianana amin'ny fahalianana sy ny fahasahiany dia mitaona ny olona hahita fomba fiasa vaovao.
Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd. dia mikatsaka hatrany ny fitomboan'ny fikambanana sy ny mpiasan'izy ireo, manome azy ireo tontolo iainana miasa tsara, be dia be ny fivoaran'ny asa aman-draharaha, ny fiofanana manankarena ary ny fifanakalozana iraisam-pirenena.
Amin'ny alàlan'ny fanombanana ny lahatsoratra sy ny fametrahana mari-pamantarana ho an'ny mpiasa tsirairay, ny Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd. dia manome ny mpiasa andraikitra mazava sy takiana mazava, mamporisika ireo mpiasa handresy ireo sakana amin'ny maha matihanina, hamita ny iraka ampanaovina azy ireo, ho be fanantenana sy hiasa mafy. , sahia tompon'andraikitra, ary mahatratra ny fampandrosoana ny asa amin'ny alalàn'ny fianarana sy ny fampiharana tsy tapaka.
Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd. dia miaro ny fiaraha-miasa eo amin'ny departemanta sy ny mpiasa mifototra amin'ny iraka nampitambatra sy ny fahatokisana tanteraka, manangana ny tombotsoan'ny orinasa miaraka amin'ny tombotsoan'ny ekipa, mamporisika ny fizarana vaovao eo amin'ireo mpiasa, mametraka fifandraisana miasa tsara ary mankasitraka ny fandraisan'anjaran'ny hafa. amin'ny asa.